Tirada Dadkii ku dhintay Qaraxii Habeen hore ka dhacay Jabuuti oo korortay!! | Awdal State News Network
Home » ANALYSIS & EVENTS » Tirada Dadkii ku dhintay Qaraxii Habeen hore ka dhacay Jabuuti oo korortay!!
Tirada Dadkii ku dhintay Qaraxii Habeen hore ka dhacay Jabuuti oo korortay!!
in, May 26, 2014-Boramacity.com — Warar kasoo baxaya qaraxii ka dhacay maqaayadda La Chaumiere oo ku taalla magaalada Jabuuti habeen hore ayaa sheegaya in tirada dadka ku dhintay ay gaarayaan 20-qof, iyadoo ay ku dhaawacmeen 15-qof oo kale, sida ay baahisa wakaaladda wararka AFP.
Iyadoo lasoo xiganayo wasiirka arrimaha gudaha Jabuuti, Xasan Cumar Maxamuud ayaa sheegay in laba qof oo ka mid ah dadkii dhintay ay ahaayeen wiil iyo gabar ka dambeeyay qaraxyada khasaaraha geystay.
“Qaraxyadan oo kale ma ahayn kuwo Jabuuti horay uga dhacay, waxaana dadka ku dhintay ku jiray ruux Turki ah oo halkan shaqo u joogay, waxaana sidoo kale uu ka soo gaaray dhaawac toddoba qof oo Faransiis ah,” ayuu yiri wasiirka.
Wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska ayaa sheegay in askarta uga dhaawacmay Jabuuti uu mid ka mid ah dhaawiciisu culus yahay, ayna qorsheynayaan inay kasoo qaadaan Jabuuti.
Sidoo kale, wargeyska De Telegraaf ee kasoo baxa dalka Nehterlands ayaa wariyay in lix askari oo dalkeeda u dhashay ay six un ugu dhaawacmeen weerarkaas oo ka dhacay maqaayad ay dadka ajnabiga ah wax ka cunaan.
Weli ma jirto cid sheegatay in weerarkaas ka dambeysay, sidoo kalena ma jirto cid loo qabtay, waxaana weerarkan si adag u cambaaareeyay madaxweynaha dalka Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle oo sheegay in lagu carqaladyenayo amniga gobolka.
Ciidamada Jabuuti ayaa waxay qayb ka yihiin howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ee Somalia ku sugan, iyadoo Al-shabaab ay horay ugu hanjabtay inay weerarro la beegsanayso dalalka ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya.
Al-shabaab ayaan weli ka hadlin weerarkaas, iyadoo dadkii fuliyay weerarka horay loo sheegay inay yihiin Soomaali, balse mas’uuliyiinta Jabuuti ayaa sheegay inay weli socdaan baaritaanno oo aan taas lagu deg-degi karin.
Ref: Hiiraan Online